महरा पछि अफताब, अब पालो कस्को ? « रिपोर्टर्स नेपाल
महरा पछि अफताब, अब पालो कस्को ?
काठमाडौं, २७ असोज । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको जर्बजस्ती प्रकरणको सनसनीपूर्ण खुलासामा नेपाली काँग्रेसको संलग्नताबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्व माओवादीभित्र छलफल नै चल्यो । घटनापछि काँग्रेससम्वद्ध नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी कारबाहीका लागि कडा रुपमा आवाज उठाउन थालिन् । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा महराको राजीनामा माग्नेमा अगाडि देखिए ।
काँग्रेसका केही नेताहरु समेत महरा प्रकरणमा कारबाही गराउन सक्रिय भएपछि नेकपाभित्रका पूर्व माओवादीहरुले इँटको जवाफ पत्थरले दिनुपर्ने विषय प्रचण्डसम्म राखे । महरा पक्राउ परेको एक हप्तामै नेपाली काँग्रेसका नेता मोहमद अफताब आलम पक्राउ परे । उनीमाथि १२ वर्ष अघि ईँट्टा भट्टामा जिउँदै मानिसलाई हालेर मार्ने आदेश दिएको अभियोग थियो ।
घटनाबारे छानविन भएपनि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर, महरा पक्राउलगत्तै आलम पक्राउ पर्नु संयोग मात्र होइन । नेकपा नेतृत्वको सरकारले काँग्रेसलगायत अन्य दलहरुका नेतामाथि लागेको अभियोग र मुद्यालाई उल्टाउने रणनीति प्रस्तुत गरिसकेको छ । आलम जघन्य अपराधको मुद्यामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएका छन् । काँग्रेसले देशभर सुरक्षित भनेको सिट गुमाउँदा पनि अफताप यति प्रभावशाली थिए कि उनी रौतहटबाट सायदै हार्थे । उनको प्रभावका कारण आसपासका जिल्लामा पनि चुनाव जित्न काँग्रेसलाई सजिलो हुन्थ्यो ।
२०६४ सालको घटनाको फाइल खोलिएपछि अफताब पक्राउ परेका हुन् । उनको फाइल खोलिनुमा महरा काण्डले पनि भूमिका खेल्यो । आफ्नै प्रभावशाली नेता समेत पक्राउ परेपछि अब अपराधिक गतिविधि गर्ने विपक्षी नेताहरुलाई पक्राउ गर्ने निर्देशन उच्च तहबाट पुगेको छ । यसले काँग्रेसलगायत केही दलका नेताहरुमा तनाव बढेको छ ।